Kwayaka: Android Central
Iyo Oculus Kuda inogadzira inonyudza chaiwo maitiro ezvakaitika. Izvo zvakanak kutamba mitambo, asi kwete yakanakira mapato uye nezvimwe zviitiko zvevatano. Kana iwe uchida shamwari dzako uye mhuri kuona izvo zvaunoona mukati memusoro wefoni, iwe unofanirwa kukanda yako Oculus Kuda kune imwe chishandiso. Iyo Oculus Kutsvaga inotsigira zviri pamutemo kukanda kune akati wandei Chromecast zvishandiso uye zvakare inogona kukanda yakananga kumafoni evanhu.
Mishonga inoshandiswa mumutungamiri uyu
Yakamira VR: Oculus Quest ($ 399 kuAmazon)
Kurasa kunaka: Google Chromecast 3rd Chizvarwa ($ 35 kuAmazon)
Kubatanidza kune iPhones: Oculus app yeApp (Mahara paApp Store)
Kubatanidza kune Android: Oculus app yeApp (Mahara paGoogle Play)
Ungatanga sei kukanda kubva pafoni yako
Kukanda Oculus Kuda kune Chromecast inokutendera kuti ugovane ruzivo rwako rweVR kushamwari uye mhuri mumba yekutandarira. Mitambo yakaita saBeat Saber kukandwa kuTV inogona kutora mukamuri uye inogadzira mamiriro emuchati. Kuvonga a zvichangoburwa, iyo Oculus Kutsvaga inogona kukanda kune zvakasiyana siyana zvemidziyo, kusanganisira iyo 3G Gen Chromecast.
Vhura iyo Oculus app pane iOS kana Android.
Tora iyo kukanda icon mukona yokumusoro kurudyi (kurudyi padyo neye bhero icon).
Sarudza iwe Oculus Quest (chero michina inotsigirwa inoratidza pane iyi runyorwa).
sarudza Chromecast yako kifaa mune iyo "Cast To" menyu.
Paunenge iwe uchinge wabatanidza, iyo Oculus Quest inokanda kune yako TV kuburikidza neChromecast yako. Kune mamwe maapulogalamu anovharira kukanda, asi mazita makuru akati wandei Beat Saber rutsigire.
Ungatanga sei kukanda kubva kumusoro wako
Kana imwe yako Oculus Kuda ichimhanya vERSION 10.0 kana gare gare, unogona kutanga kukanda zvakananga kubva mumusoro. Iwe haufanire kushandisa foni yako kukanda yako Oculus Kuda kune mudziyo wakaita seChromecast kana Chromecast TV.
Enda kuOculus Kuda Home sikirini pamusoro wako.
Sarudza iyo mudziyo zvaunoda kukanda kuna.
Ungangoda kusarudza Kutanga Kukanda pane yako kifaa chakatarwa zvichienderana nekuti uri kukandira chii.
Kukwanisa kukanda kune mudziyo zvakananga kubva mumusoro ndiko kuwedzerwa kwakanaka. Iyo yakawanda iyo Oculus Kuda inogona kumhanya yakazvimirira, zvirinani.
Nzira yekukanda yako Oculus Kuda kune foni
Nepo iyo Oculus Kuda inogona kukanda kuTV, iyo zvakare iine iyo inokwanisa kugona kukanda kune foni. Iyi sarudzo yakanaka kune chero munhu asina kana chinotsigirwa neChromecast chishandiso kana anongoda kugovera yavo Oculus Mukurumbira nemudziyo mumwe.
Matanho eizvi akada kufanana nokukanda kuChromecast. Iwe unongosarudza "Iyi Foni" pane chero imwe mudziyo seinokukandira chinangwa. Ita shuwa kuti foni yako neOculus Yako iriku network imwe chete isina waya usati watanga kuita uku.
Vhura iyo Oculus app.
sarudza Iyi Runhare mune iyo "Cast To" menyu.
Google Chromecast 3rd Chizvarwa
Chinhu chinogona kubata VR kukanda uye midhiya
Ichi chishandiso chinogona kuratidza yako Oculus Quest's show paTV yako uye inokwanisawo kubata hwakawanda midhiya yakakanda midhiya.
$ 35 ku Amazon